Nnwom 69 NA-TWI - Osufrɛ - Gye me nkwa, O Onyankopɔn! - Bible Gateway
Nnwom 68Nnwom 70
Nnwom 69 Nkwa Asem (NA-TWI)
69 Gye me nkwa, O Onyankopɔn! Nsu no deda me kɔn mu. 2 Meremem wɔ atɛkyɛ mu, na asase a ɛso wo nni baabi. Madu subunu mu na asorɔkye no pɛ sɛ ɛfa me. 3 Mafrɛ mabrɛ. Me menem ayow. M’ani yɛ me yaw efisɛ, magyen no ara repɛ wo mmoa. 4 Wɔn a wɔtan me kwa no dɔɔso sen me tiri so nhwi. M’atamfo twa atoro to me so; wɔyɛ den na wɔrepɛ akum me. Wɔma medan nneɛma a manwia mema.